आँचलको श्रीमान उदिपसंग नाम जोडिएकी सिपोराले लेखिन् यस्तो मन छुने स्टाटस ! «
आँचलको श्रीमान उदिपसंग नाम जोडिएकी सिपोराले लेखिन् यस्तो मन छुने स्टाटस !
Published : 14 April, 2020 7:06 pm
नायीका आँचल शर्मा र चिकित्सक उदिप श्रेष्ठको विवाह पछि भलिबल खेलाडी सिपोरा गुरुङको नाम एकाएक चर्चामा आयो । लगभग गुमनाम जस्तै बनेकी सिपोरो उनीहरुको विवाह पछि सामाजिक सञ्जालमा निकै खोजिने र पढिने ब्यक्ति बनिन् । यसको कारण उनले दुई वर्ष अघि दिएको एउटा अन्तरवार्ता थियो । दुई वर्ष अघि उनले मिडियामा दिएको अन्तरवार्तामा आफु प्रेम सम्बन्धमा रहेको भन्दै प्रेमीका रुपमा उदिपलाई चिनाएकी थिइन् । उनले केही समय पछि आफुहरु विवाह गर्ने योजनामा समेत रहेको बताएकी थिइन् । अमेरिकामा रहँदा प्रेममा रहेको भनिएका उनीहरुका तस्बिर पनि सार्वजनिक भए । प्रेमलाई खुला रुपमा प्रस्तुत गरेकी सिपोरा र उदिपको प्रेम विवाहमा परिणत हुन सकेन । सिपोरा अमेरिकामै रहेको र यता नेपालमा उदिपले आँचलसंग विवाह गरेपछि सिपोराको विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भयो ।
उनको त्यो दुई वर्षको कुरालाई जोडेर भिडियो बनाइए । अभिनेत्री आँचल शर्माका श्रीमान् उदिप श्रेष्ठसँग अमेरिकामा रहँदा उनी प्रेम सम्बन्धमा रहेको कुरालाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ । युट्युबमा सिपोरा र उदिपको विषयमा सयौंको संख्यामा भिडियो बनेका छन् । उनीहरु प्रेममा रहँदाका तस्विरहरु पनि अहिले सार्वजनिक भैरहेका छन् ।
फिल्म ‘भूईंमान्छे’ प्रदर्शनको समयमा अभिनेत्री सिपोराले आफू विगत २ वर्षदेखि उदिपको प्रेममा रहेको र २०७४ सालको मंसिरमा विवाह गर्ने तयारी भैरहेको बताएकी थिइन् । तर, उनीहरुको प्रेम सम्बन्ध विवाहमा परिणत हुन सकेन ।
अभिनेत्री आँचल शर्मासँग विवाह गरेपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सिपोरालाई धोका दिएको भन्दै उदिप श्रेष्ठलाई गा’लीगलोच गरिरहेका छन् । यस विषयमा कुनै प्रतिकृया नदिएकी सिपोरोले विश्वले भोगेको कोरोनाको विषयमा भने निकै मार्मीक स्टाटस लेखेकी छन् । सामाजिक सञ्जालमा भने सकृय देखिने सिपोराले कोरोनाका कारण विश्व नै दु खि भएको भन्दै मा र्मीक स्टाटस लेखेकी छन् ।
नायिका तथा भलिबल खेलाडी सिपोरा गुरुङ अमेरिकामा छिन् । तर, उनी विश्वकै श क्तिशाली देशमा रहेर पनि असुरक्षित महशुश गरिरहेको बताउँछिन् । सामाजिक संजालमा स्टाटस कोर्दै उनले लेखेकी छिन्– ‘कोरोनाले नदुखेको ठाउँ संसारमै सायदै होला । आफू शक्ति शाली देशमा भएर पनि असुरक्षित महसुश गर्नु आफैँमा विडम्बना हो । जीवन रहे संसार रहन्छ । जीवनसँगै मानवताको रक्षाका लागि जुटौँ ।’ उनले, हरेक विपत्तीले एउटा न एउटा पाठ सिकाएर जाने भन्दै उनले चि न्तालाई छाडेर संसारकै हित हुने चि न्तमा लाग्न पनि अपिल गरेकी छिन् ।